Cameroon oo ku guulaysatay koobkeedii shanaad ee Koobka Qaramada Afrika - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSportsCameroon oo ku guulaysatay koobkeedii shanaad ee Koobka Qaramada Afrika
February 6, 2017 Puntland Mirror Sports 0
Cameroon oo ku guulaysatay koobkeedii kowaad ee Koobka Qaramada Afrika. [Sawirka: BBC]
Xidigaha madow ee Cameroon ayaa ku guulaystay koobkoodii kowaad ee Koobka Qaramada Afrika kadib markii ay 2-1 ku garaaceen ciyaartowgii reer Masar.
Intii lagu guda jiray qatbtii kowaad ee ciyaarta, Mohammed Elneny ayaa hoggaanka u dhiibay Masar laakiin waxaa goolkiisa ka jawaabceshay Nicolas N’Koulou.
Qaybtii labaad ee ciyaarta ayaa Vincent Aboubakar najiijada ciyaarta ka dhigay 2-1.
Cameroon ayaa noqotay Qaranka ugu badan ee hantay Koobka Qaramada Afrika, koobkeedii kan ka horeeyay ayay qaaday 15-sanno kahor.
January 8, 2017 Tartanka kooxaha heerka kowaad ee kubada cagta Puntland oo Garoowe ka bilaabmay
January 10, 2017 FIFA oo 48 ka dhigtay dalalka ka qeybgalaya Koobka Aduunka